एक SEO धोका कसरी खोज्ने Martech Zone
शनिबार, जनवरी 21, 2012 आइतवार, जनवरी २,, २०१। Douglas Karr
खोज इञ्जिन अनुकूलन एक दोहोरो तरवार हो। जबकि गुगलले वेबमास्टर्सलाई उनीहरूको साइटहरू अनुकूलित गर्न र कुञ्जी शब्दहरूको प्रभावकारी ढंगले फेला पार्न र सही अनुक्रमणिकामा प्रयोग गर्न दिशानिर्देशहरू प्रदान गर्दछ, केही एसईओ मान्छेलाई थाँहा हुन्छ कि ती एल्गोरिदमहरूको शोषण गर्दा उनीहरूले सिधा शीर्षमा खिच्न सक्छन्। एसईओ कर्मचारीहरु धेरै दबाव मा हो आफ्नो कम्पनीहरु लाई राम्रो क्रम मा राख्न, एसईओ परामर्शदाताहरु पनि अधिक अन्तर्गत।
कम्पनीहरूले महसुस गर्न सक्दैनन् कि तिनीहरूका कर्मचारीहरूले सर्टकट लिइरहेका हुन सक्छन्। र एसईओ परामर्शदाता वा एजेन्सीहरूमा लगानी गर्ने कम्पनीहरू कन्सल्टेन्टले उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने दर्जा निर्धारण कसरी पाउँदैछ भन्ने बारे पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ हुन सक्छन्। गत बर्षको शुरुमा, JC Penney यो कठिन तरिकाले सिक्यो जब न्यू योर्क टाइम्सले एक लेख चलायो, खोजीको डरलाग्दो सानो रहस्य। अभ्यास जारी रहन्छ, यद्यपि, दांव धेरै छ।
तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धा धोखा दिईएको पनि पाउन सक्नुहुन्छ। कसरी? यो वास्तवमै एकदम सजिलो छ।
यदि SEO परामर्शदाता वा कर्मचारी हो भने समायोजन गर्न कहिल्यै नसोध्नुहोस् तपाईंको साइट वा तपाईंको सामग्रीमा, त्यहाँ राम्रो अवसर छ उनीहरूले केवल सामग्री सिर्जना गर्न अफ-साइटमा काम गरिरहेका छन् जुन किवर्ड-रिच ब्याकलि rich्कहरू मार्फत तपाईंको साइटमा फिर्ता लि .्क भइरहेको छ। गुगलले अन्य कति साईटहरू उनीहरूसँग लि are्क भइरहेको छ भन्ने आधारमा साइटहरू क्रमबद्ध गर्दछ। यो लिंक गर्ने साइटको अधिकारमा पनि आधारित छ। यदि तपाईं अफ-साइट सामग्रीको लागि भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सम्भवत ब्याकलिks्कहरूको लागि भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ र यो महसुस पनि गर्नुहुन्न।
तपाईलाई सायद आशंकित हुन सक्ने डोमेन हेर्नुहोस् खुल्ला साइट एक्सप्लोरर। डोमेन प्रविष्ट गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् लंगर पाठ ट्याब तपाईं परिणाम मार्फत पृष्ठ रूपमा, प्रत्येक गन्तव्य साइटहरू कि हेर्नुहोस् डोमेनमा लिंक गर्न कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्दै प्रश्नमा। जब तपाईं खुला फोरमहरू, प्रयोगकर्ताहरूको हस्ताक्षरमा लिंकहरू, र कुनै अर्थमा नहुने ब्लगहरू फेला पार्न सुरू गर्नुहुन्छ ... तपाईं भुक्तान गरिएको ब्याकलिंक्सको साथ काम गरिरहनु भएको हुन सक्छ।
यदि तपाइँको एसईओ परामर्शदाता हो लेख्न र सामग्री बुझाउँदै तपाइँको कम्पनी को लागी, निश्चित गर्नुहोस् कि त्यस सामग्रीलाई अनुमोदन गर्नुहोस् र उनीहरूले पेश गरेका ठाउँहरूको सूची प्राप्त गर्नुहोस्। तपाइँको सामग्री साईटहरूमा प्रकाशित हुन नदिनुहोस् जुन प्रासंगिक छैन, विज्ञापन र अन्य ब्याकलि full्कले भरिएको छ, वा सामान्यतया कम गुणस्तर। तपाईं आफ्नो कम्पनी उच्च प्रासंगिकता र गुणवत्ता साइटहरूसँग सम्बन्धित चाहनुहुन्छ - केवल उत्तम स्वीकार्नुहोस्।
यदि तपाईं सामग्री अनुमोदन गर्दै हुनुहुन्छ भने, जारी राख्नुहोस् नयाँ ब्याकलिंक्स विश्लेषण गर्न खुला साइट एक्सप्लोरर प्रयोग गर्नुहोस्। कहिलेकाँही एसईओ परामर्शदाताहरु अनुमोदित सामग्री एक ठाउँमा पोष्ट गर्दछ, तर भुक्तानी गर्न जारी राख्नुहोस् वा अन्य ब्याकलिंक्स अन्यत्र राख्नुहोस्। यदि यो अनौंठो देखिन्छ भने, यो सायद हुन सक्छ। र यदि धेरै लिंकहरू अनौंठो देखिन्छन् भने, तपाईं सायद एसइओ धोकासँग काम गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईको साइटको र्याँकि naturally प्राकृतिकरुपमा बढाउन यो सम्भव छ। हालको साइट र प्लेटफर्म अनुकूलन पहिलो चरण हो, र त्यसपछि यसलाई पछाडि बढाउँदै छ। हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौं वैध सार्वजनिक सम्बन्ध फर्महरु हाम्रो ग्राहकहरूको तर्फबाट कथाहरू पिच गर्न उत्कृष्ट मिडिया सम्बन्धको साथ। हामी जहिले पनि एउटा ब्याकलिink्क पाउँदैनौं ... तर पनि जब हामी गर्दैनौं, हामी प्रासंगिक दर्शकहरूको पहुँच प्राप्त गर्छौं। हामी पनि ध्यान प्राप्त गर्न ह्वाइटपेपर, ईबुक, घटनाहरू र इन्फोग्राफिक्स प्रयोग गर्दछौं। जब तपाईंसँग लि worth्क गर्न लायकको केही हुन्छ, मानिसहरूले यसलाई लिंक दिन्छन्।
तपाइँ ठ्याक्कै निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाइँले धोकामा पहिचान गर्नुभयो, अब के
के यो कर्मचारी हो? खराब लि links्कहरू हटाउन सामान्यतया सम्भव छैन, तर तपाईं तिनीहरूलाई प्रयास गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् कि यो अस्वीकार्य हो र सम्पूर्ण कम्पनीलाई जोखिममा राख्छ। राम्रो श्रेणीकरण वा भोल्यूमका लागि तपाइँका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत नगर्नुहोस्। सट्टा, तिनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुहोस् अत्यधिक प्रासंगिक साइटहरूमा अविश्वसनीय उल्लेख प्राप्त गर्न को लागी।
के यो एसईओ परामर्शदाता हो? तिनीहरूलाई दाउरा
के यो एक प्रतिस्पर्धी हो? गुगल खोजी कन्सोल वास्तव मा एक रिपोर्टिंग फार्म छ डोमेन पेस गर्नुहोस् जुन ब्याकलिlin्कहरू खरीद गर्दै छ र साइट वा सेवा तपाईंलाई थाहा छ उनीहरूले प्राप्त गर्नका लागि काम गरिरहेका छन्।
अज्ञात एक रक्षा छैन जब यो एसईओ रैंक प्राप्त धोखा गर्न आउँछ। ब्याकलिंक्सको लागि भुक्तान गर्नु गुगलका सेवा सर्तहरूको उल्ल .्घन हो र तपाईंको साइट गाडिनेछ, तपाईंलाई यसको बारेमा थाहा थियो वा थिएन। महान्, प्रासंगिक सामग्री बारम्बार लेख्नुहोस् र तपाईंसँग सामग्री हुनेछ जुन जैविक खोजीलाई आकर्षित गर्दछ। चिन्ता नगर्नुहोस् वा द्वारा धोका दिन लोभ्याउनुहोस् जैविक रैंकमा ध्यान केन्द्रित गर्दै... उत्कृष्ट सामग्री मा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् र तपाईं आफैंलाई अझ राम्रो र राम्रो देख्नुहुनेछ।
यसमा अन्तिम नोट। म सबै समय ब्याकलिinking्क रणनीतिहरूमा काम गर्थें। के मैले कहिले मेरो लागि वा मेरो ग्राहकहरूको लागि ब्याकलिks्कहरूको लागि भुक्तान गरें? हो। तर मैले फेला पारे कि अन्य प्रचारात्मक विधिहरू प्राय जसो नतीजा हुन्छन् अधिक परिणामहरू ... केवल भ्रमणहरूमा होइन, तर विडंबनाका साथ श्रेणी साथै! म अझै पनि हाम्रो ग्राहकहरूको श्रेणी र विश्लेषण गर्दछौं र उनीहरूको ब्याकलिंक्स प्राय: समीक्षा गर्दछु। उनीहरूको ब्याकलिंक्स नाद साइटहरूको विश्लेषण गरेर उनीहरूले उल्लेख गरेको साइटहरू, म प्रायः महान संसाधनहरू भेट्टाउँछु जुन मेरा ग्राहकहरूको बारेमा लेख्न सक्छ। म प्राय: यी लक्ष्यहरू हाम्रो सार्वजनिक सम्बन्ध फर्मलाई प्रदान गर्दछु र तिनीहरूले त्यहाँ केही उत्कृष्ट कथाहरू पिच गर्छन्।
टैग: ब्याकलिinking्कbacklinksखोज इन्जिन अनुकूलनएसईओएसईओ ब्याकलिinking्क